बन्ला त बोल माया २ ? प्रकाश सपुतले यस्तो खुलासा गरे (अन्तरवार्ता) – Complete Nepali News Portal
बन्ला त बोल माया २ ? प्रकाश सपुतले यस्तो खुलासा गरे (अन्तरवार्ता)
Tika Prasad Amgain July 1, 2018
एक अन्र्तवार्ताको क्रममा उनले बोल माया गीतको अडियो बन्नु पूर्व नै भिडियोको कन्सेप्ट बनाएको समेत खुलासा गरे । भिडियो बनाउँन धेरै दुःख गरिएको स्मरण गर्दै सपुत भन्छन्–यो गीतले यति धेरै सथान पाउला जस्तो लागेको थिएन’ । उनले बाल्यकालमा गाउँकै मेलामा पनि यस्तो बियोगान्त गीतहरु गाएको स्मरण गरे । उनीसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस्